Ihe ọkụkụ kachasị ewu ewu. Nsonaazụ ntuli aka n'etiti ndị na -agụ akwụkwọ akụkọ "Potato System" - "Sistemu Sistemu"
Isi News Mpempe akwụkwọ
в News, Mpempe akwụkwọ
Kedu ihe ọkụkụ nke ndị na -agụ akwụkwọ akụkọ Potato System na -akọ?
Iji nweta azịza ọhụrụ maka ajụjụ a (yana ị nweta nkwubi okwu: gịnị ka anyị kwesịrị ide banyere ya na magazin), anyị haziri ntuli aka abụọ na ọwa telegram pụrụ iche nke mbipụta ("Agronomi" na "Agronomy-yabasị "). Ngụkọta mmadụ 225 abanyelarị na ha.
Ntuli aka nke mbụ etinyebere na poteto na akwụkwọ nri, na, dịka a tụrụ anya ya, ndị sonyere nyere "nkwụ" n'ọkwa ndị kacha mkpa maka akwụkwọ akụkọ anyị na ndepụta: 55% nke ndị na -aza ajụjụ na -etinye aka na nduku okpokoro, yana 28% - nke mkpụrụ.
Eyịm na karọt na -amasịkwa ndị na -ege ntị (ihe ọkụkụ abụọ ahụ nwetara 25% nke votu ọ bụla). Ihe na -adịchaghị obere bụ beets na kabeeji (24% ọ bụla). Udi nke “ịpụ apụ” na-ama ọkwa nke ukwuu: tomato, kukumba, ose, anyụ na egusi ọnụ meriri 13% nke votu ahụ.
14% nke ndị zaghachirinụ na -arụ ọrụ ịkọ galik. Na elu (salads, pasili, ábụ́bà ábụ́bà) na beets shuga na -emechi "ọkwa" - ọnọdụ ndị a na -atọ ụtọ maka 6% ndị sonyere nyocha.
Dabere na nsonaazụ nyocha nke abụọ, anyị achịkọtara ọkwa nke ihe ọkụkụ na-abụghị akwụkwọ nri. Ahịrị nke mbụ na elu -9 anyị bụ ọka wit (oge oyi na oge opupu ihe ubi) - 27% nke ntuli aka. Obere ntakịrị - 23% - natara udi "ọdịbendị ndị ọzọ" (ọ ga -amasị m ịga n'ihu na mkparịta ụka a na ịkọwa - nke bụ?). Ndị na -agụ akwụkwọ nyere 17% votu maka rye na ọka (gụnyere silage), 15% - maka ọka bali. Sunflower (13%) na peas (12%) bụ otu nzọụkwụ n'azụ ọka bali. Na njedebe nke ndepụta ahụ bụ soybean (9%) na ọka (8%).
Data na -agbanwe ka a ka na -echebara echiche echiche. Anyị ga -eburu n'uche ọkwa abụọ a mgbe anyị na -eme atụmatụ akụkọ maka 2022.
Kedu akwụkwọ nri ị na -eto
Poteto 55 votes
Mkpụrụ nduku 28 votes
Eyịm 25 votes
Carrots 25 votes
Cabbage 24 votes
Beetroot 24 votes
Sugar beet 8 votes
Garlic 14 votes
Akwụkwọ nri (salads, pasili, eyịm, wdg). 8 votes
Akwụkwọ nri ndị ọzọ (tomato, kukumba, egusi, anyụ, wdg). 15 votes
Kedu ihe ọkụkụ, ewezuga akwụkwọ nri, ị na -eto n'ugbo gị, gụnyere na ntụgharị mkpụrụ
Wheat (gụnyere ọka wit n'oge oyi) 28 votes
Barley (gụnyere oge oyi) 17 votes
Otis 9 votes
Ọka gụnyere maka silage 19 votes
Soy 10 votes
Sunflower 14 votes
Rye 19 votes
Peas 13 votes
Omenala ndị ọzọ 23 votes
Mkparịta ụka anyị Agronomy
Ngwa mkpanaka anyị Usoro nduku
Bayer gosipụtara ahịrị ngwaahịa kacha mma